Àgwà ziri ezi na-enyere gị aka idozi ọdịiche dị n'etiti ikike na ọchịchọ. - Amaghi ama - Quedia Pedia
A gọziri anyị niile ike na onyinye dị iche iche. Ka anyị na-etolite, anyị na-ekpughere ụdị nhọrọ dị iche iche anyị nwere ike ịhọrọ n'ịkpụzi ndụ anyị ma anyị ji nwayọ wee malite ịchọrọ nrọ anyị.
Nrọ ndị a na-aghọrọ anyị agụụ ka anyị na-amalite ịchụso ha. O buru ochicho obi anyi. Tupu anyị ahọrọ ihe anyị na-achụ, anyị kwesịrị inyocha nke ọma ihe anyị na-achụ. N'otu oge, anyị etinyela anya anyị na nrọ anyị, anyị ga-anọgidesi ike ma lekwasị anya.
Anyị ga-ahụ na nsogbu dị iche iche ga-abịa n'ụzọ anyị mana n'ihe niile a, ihe kacha mkpa bụ ịnwe mmụọ ọma. Ga-amata na ka ị na-eto eto na ọ bụ naanị omume gị na-akpaghasị gị. Ọ na - enyere gị aka ịnwale ihe niile na - atụ gị ụjọ.
Ga-akari ike gị ị tolitere site n’inwe uche ziri ezi. Were ihe nile mebiri emebi nke ukwu gi ma merie onwe gi aka imeri odida gi. N'ụzọ dị otu a, ị ga - ahụ onwe gị ka ị na - abịaru nrọ gị.
Mgbe ị meriri ihe isi ike na ịzọ ije, ị ga-ahụ na ị ga-enwe ike ịgba ndị ọzọ ume. Ga-eji nwayọ nwayọ nwee ike ịdị n’agbata ike gị na ọchịchọ gị. Nke a pụtara ịchọta mkpebi na ike iji mezie oke gị na iji ike gị niile.
Nke a sitere na ịzụlite ezi echiche. Y’oburu na inwe echiche ojoo na ighochu banyere ihe ga - esi na ya puta, i ghapu iche ma tinye ike gi n’ime ihe ndi ga - egbochi gi. Ya mere, gbara onwe gị gburugburu, nchekwube, ma n’iru n’iru icho ochicho gi.
Omume Na-egosi Onyonyo
Kacha Mma Ziri Ezi Kwuru Okwu Mgbe
Ezi agwa agwa okwu
Iche echiche agwa okwu
Kwuru agwa agwa
Kwuru okwu banyere agwa
Kwuru okwu na Onodu di mfe na agwa
Kwuru okwu banyere mmeri
Nkọwapụta dị mkpirikpi Na Ọnọdụ
Akụkọ ọ bụla nwere njedebe ... Mana oge ụfọdụ bụ njedebe ọhụrụ. - Amaghi ama
Akụkọ ọ bụla nwere njedebe mana gbaa mbọ hụ na ị naghị enwe olile anya site na…
N'agbanyeghị otú mmadụ si 'na-enwe efe' ma ọ bụrụ na ọ na-echebara ndị ọzọ echiche, ha ga-achọtara gị oge. - Amaghi ama
Oge dị oke ọnụ ahịa, mana ọ bụ otu ihe maka mmadụ niile. Nke ahụ bụ ihe na-eme oge pụrụ iche. Ọ…
Kwụsị ile anya. Onweghị ihe dị ebe ahụ. Ọgwụgwọ gị, ngọzi gị na ọrụ ebube gị dị gị n’ihu, ọ bụghị n’azụ gị. - Amaghi ama
Kwụsị ile anya. Onweghị ihe dị ebe ahụ. Ọgwụgwọ gị, ngọzi gị na ọrụ ebube gị dị gị n'azụ, ọ bụghị n'azụ…
Enweghị mmekọrịta dị ka anwụ na-acha, mana mmadụ abụọ nwere ike ịkekọrịta otu nche anwụ wee lanarị oke mmiri ozuzo ahụ. - Amaghi ama
Ekwesiri ighota na mbu, mmadu kwesiri inwe nmekorita ya na onye ya…